Ujeeddo : Baaq Xabad Joojin iyo Eedeyn
Dr. Cabdi Maxamed Gureey
Shir gudoonka shirkaasi
Shir ay isugu yimaadeen odayaasha iyo waxgaradka Qowmiyadda Digil iyo Mirifle ee ku nool gobolka Georgia ayaa lagu qabtey Magaaladda Atlanta,shirkaasi oo aad loogaga hadlay Dagaaladda Culus ee ka socda meelo ka mid ah gobolka Bay waxaa laga soo Saarey Baaq Nabadeed iyo Eedeyn, waana sidan qoraalka ka soo Baxay shirkaasi :-
Sidaad la socotaanba waxaa beryahan ka dhacayey goobo Ka tirsan Gobolka Bay dagaalo ay isku baabi’iyeen labada qabiil Ee walaalaha ah ee YINTAAR iyo Hubeyr, Dagaalkaasi oo ay Ka danbeeyaan shaqsiyo wata dano gaar ahaaneed isla markaana U adeega cadowga qowmiyadda Digil iyo Mirifle waxaa ayaan Daro ah in aysan marnaba ka hadlin wakiil isku sheegyadda Qowmiyadda Digil iyo Mirifle ee ku sugan Dalka Kenya gaar Ahaan Magaaladda Nayroobi taasoo ayaan daro ah waayo Dadka ay sheeganayaan inay ka wakiil yihiin oo isku laynaya Gobolka ayaa la maqal mid ka mid ah xildhibaano isku sheega Digil iyo Mirif in uu ka hadlo ama uu baaq u soo jeediyo kooxaha Dagaalamaya. Waxaa yaab ah cid aad leedahay anigaa ka wakiil Ah oo aadan dhibkoodna waxba kaaga shan iyo toban ahayn.
Hadaba anagoo ka damqaney dilka iyo dhawaca faraha badan ee Sababay dagaalkaasi ayaan waxaan baaq u soo jeedinaynaa labada Qabiil ee ku dagaalamaya goobahaasi ka tirsan gobolka Bay In si Shuruud la’aan ah u joojiyaan dagaalkaasi oo lagu dhameeyo wada Hadal halka xabadi lagu xalin lahaa dhibka la dhax dhigay labada Qabiil ee walaalaha ah.
Sidoo kale waxaan Canaan u soo jeedinaynaa kuwa isku sheega inay Wakiil ka yihiin Digil iyo Mirif oo ku sugan Nayroobi waxaana Leenahay war hadaad wakiil ka tihiin dadkaasi ka hadla oo wax ka Qabta dhibka iyo dabka la dhax dhigay dadka aad wakiilka ka tihiin.
Ugu danbeyn waxaan Ilaah ka baryaynaa in Dhamaan Somaalidda Nabad ku soo arooro, cadowga isku dirayana dadka walaalaha ah ee Somaaliyeed ilaah naga qabto ( Amiin ).
Baaqani waxaa idin soo diray
Waxaa baaq dedged ah Kismaayo kasoo saaray dalada ku bahowdey Jubbo oo.. Guji Dec 23